Inona no The Best Ny sakafo hohanina amin'ny Lamasinina | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Inona no The Best Ny sakafo hohanina amin'ny Lamasinina
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 28/12/2019)
Best sakafo hohanina eo amin'ny fiaran-dalamby amin'izao fotoana izao raha ny marina dia tena matsiro. Satria maro ny fiarandalamby manolotra 5-kintana sy ny zavatra ilaina kilasy voalohany sakafo. Anisan'izany ny sakafo atao amin'ny izao tontolo izao malaza chefs. Angamba ianao zatra mamaky mikasika ny mahagaga sakafo in gara na tsara tarehy toerana manodidina hitanao ao amin'ny fiaran-dalamby dia. Therefore it might surprise you that the food you can eat on a train is equally exquisite.
Ireto ny ambony 7 sakafo tsara indrindra mba hihinana eo amin'ny fiaran-dalamby dia afaka mihinana
Niala ny toerana maro teto Grande-Bretagne avy London, fiaran-dalamby io manome ny tsara fisakafoana traikefa. Dining dia ahitana sakafo noforonin'ny malaza chefs Tom Kerridge ary Anton Mosimann izay fanta-daza noho ny sangany UK fisakafoana fikambanana.
2: Hiram Bingham Belmond (Peru)
Angamba ny tsara indrindra sy ny Toerana mahafinaritra dia eto an-tany. Ity ny fomba mihaja fiaran-dalamby 1920 izay mandeha amin'ny alalan'ny Peroviana ambanivohitra mahafinaritra manome sakafo. Mazava ho azy fa ny efatra-Andes sakafo ara-tsindrimandry dia ahitana ny mahafinaritra toy ny crispy Hama sy ny kininina sy ny omby miaraka amin'ny boaloboka sy ny tartar.
3: Blue Train (Afrika Atsimo) – Afrika sakafo tsara indrindra mba hihinana amin'ny fiaran-dalamby
Fiaran-dalamby io tolotra 5 Cuisine Star fantatra amin'ny hoe “Cordon Blue,” izay ahitana sakafo isan-karazany eo an-toerana natao tamin'ny sakafo. Ny sasany amin'ireo matsiro hanim-py ohatra aotirisy, South African oysters, ary ny nankafy.
4: Great Southern Rail (Aostralia)
Toy izany koa ny Blue Train, dia afaka mahazo an-toerana vaovao sourced sakafo ity Australian Southern Rail. The chefs, mpamatsy an-toerana, ary ny mpamboly tonga miaraka mba hamorona Aostralia nahandro mitondra ny tsara indrindra na sakafo sy ny divay. Ny fiaran-dalamby dia manasongadina ihany koa ny trano fisakafoanana maro izay fara tampony manolotra vilia. Ohatra kangaroo, saltbush sy ny bibidia Rosella voninkazo, barramundi ary Margaret River fromazy.
5: Napa Valley Wine Train (California) – America sakafo tsara indrindra mba hihinana amin'ny fiaran-dalamby
Mazava ho azy, Lamasinina Tsy karazana anarana io dia hanompo divay tsara dia tsara in be dia be ary koa manompo sakafo lehibe. The 3 lakozia tao an-tsambo manome mpandeha amin'ny Mazava ho azy fa maro Gourmet sakafo tao amin'ny fiaran-dalamby izay natao ary nanorina in 1917.
6: Orient Express (Eoropa)
Ao amin'ny toerana voalohany, ny teny Orient Express any tanana-in-tanana amin'ny tsara fisakafoana. Ity izao tontolo izao-malaza fiaran-dalamby lavitra amin'ny alalan'ny sakafo Eoropa sy ny tolotra natao tamin'ny sakafo vaovao nangonina teo ny fiarandalamby fiatoana. Ny Chef anatiny Yannick Alleno dia recreated ny kilasy iray miaraka amin'ny vanim-potoana teo aloha toy ny lovia Royal pitipoà, Bresse akoho fricassee amin'ny holatra ary natono vary.
7: Royal Ekosey (Scotland) – Eoropa ny sakafo tsara indrindra mba hihinana amin'ny fiaran-dalamby
Farany eo amin'ny Nofantenana tsara fisakafoana fiarandalamby, fiaran-dàlamby ity dia manasongadina manan-tantara roa fisakafoana fiara. Afaka mankafy sakafo nentim-paharazana toy ny kippers na Scottish sakafo maraina. Mariho tsara fa io sakafo hariva eo amin'ny fiaran-dalamby dia tena ara-dalàna, ka ho azo antoka fa manao palitao tompokovavy sy ny vehivavy akanjo araka ny tokony ho ny nahandro.
Boky tapakila ho an'ny fiaran-dalamby amin'ny sakafo matsiro
Tamin'ny fotoana izao fa dia atao miaraka ny famakiana, ka ahoana ny hevitrao ny sakafo tsara indrindra hihinana eo amin'ny fiaran-dalamby. Ao amin'ny Save A Train isika manerana an'i Eoropa manarona fiaran-dalamby izay manome sakafo tsara ho an'ny mpandeha. Famandrihana tapakila ny lamasinina Tsy mbola mora kokoa. boky ny fiaran-dalamby Tsidika eo amin'ny toerana amin'izao fotoana izao sy amin'ny latsaky ny 3 minitra dia afaka mahita ny fiaran-dalamby tonga lafatra tapakila ho amin'izay haleha. Buy Mampiofana ny Tickets amin'ny fomba maro, ankoatra ny lehibe Sary nahazoan-Card.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-meals-trains/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ru ny / en na / de kokoa fiteny.
#sakafo fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel